Izethulo Zomkhiqizo We-Tech | Izindaba zamagajethi
Umkhakha wezobuchwepheshe uyaphila kakhulu. Nsuku zonke imikhiqizo wethula imikhiqizo emisha yezobuchwepheshe ukuzama wow emakethe kanye nabathengi. Kusuka ku-Actualidad Gadget sikulethela zonke izindaba zemicimbi yezethulo zazo zonke izinhlobo zamadivayisi.
Ufuna ukuba usesikhathini yiziphi izinhlobo ezifana ne-Samsung, LG, Sony, Apple, Xioami nezinye eziningi ezikhona?. Ungaphuthelwa yilesi sigaba. Sikunikeza izithombe namavidiyo akhethekile eyenziwe ithimba lethu lokuhlela.
Izindaba zakamuva ngezethulo zomkhiqizo
IHuawei ivuselela i-laptop yayo ye-MateBook D 15 ngama-Intel chips amasha
Por UPaco L Gutierrez kwenza Izinyanga ze-7 .
Kancane kancane inani lama-laptops avuselela amaprosesa alo esizukulwaneni esisha se-Intel ngu ...
I-Amazon yethula iFire HD 8 entsha ngentengo yokuncintisana
Por UMiguel Hernandez kwenza iminyaka 2 .
Amathebulethi ayimakethe ebonakala ngathi iphelile, kepha zisenendawo ethakazelisa kakhulu yomphakathi, ku ...
IPoco F2 Pro: Isikrini esiningi, ukusebenza okuningi nentengo ethe xaxa
Inkampani ephethwe yiXiaomi ebizwa ngePocophone yafika eminyakeni emibili edlule emakethe yaseSpain nePoco F1 yayo, isiginali ...
I-Exynos 9825: Iprosesa ye-Galaxy Note 10
Por U-Eder Esteban kwenza iminyaka 2 .
I-Galaxy Note 10 ne-10 + zisemthethweni, sesivele sazi ukuthi yini i-Samsung esishiya nayo nge-high-end yayo entsha….
I-Stadia, inkundla entsha yokudlala online yakwaGoogle, ifika
Por URafa Rodríguez Ballesteros kwenza iminyaka 3 .
Besilokhu simemezela, bekumane kuyisikhathi nje ngaphambi kokuthi isigebenga esinenhlokodolobha uG sibe nentshisekelo ngemidlalo yevidiyo….
Le yiTesla Model Y entsha futhi emangazayo
Por UJordi Gimenez kwenza iminyaka 3 .
Futhi kungukuthi ngemuva kwamasonto ambalwa lapho u-Elon Musk ngokwakhe engeza ukungabaza nokuhlekisa ...
IHuawei yethula iHuawei Y7 2019, i-smartphone yawo wonke amaphakethe ane-AI
Por U-Ignacio Sala kwenza iminyaka 3 .
Eminyakeni yamuva nje, sibonile ukuthi umakhi wase-Asia uHuawei akasabi nje enye indlela ngaphakathi ...
Siqhathanisa i-Samsung Galaxy Fold neHuawei Mate X
Emasontweni ambalwa edlule besingazi ukuthi lo kuzoba unyaka wokugoqa ama-smartphones. Amahlebezi, ukuqagela nokuningi ...
Le yi-Sony Xperia 1 entsha eyethulwe eMWC
AbakwaSony baphinde basivusa ekuseni emcimbini wokukhomba ngocingo emhlabeni, i-MWC. Inkampani yethule ...
Sibe nomhlaka-20 Febhuwari omakwe ekhalendeni isikhathi eside. Namuhla ekugcineni kube usuku lweSamsung, ...
Lapha ungabona bukhoma ukwethulwa kweHuawei Mate 20 ne-20 Pro
Namuhla usuku lokuqalisa futhi ekugcineni sizokwazi ukubona ngokusemthethweni imodeli entsha yeHuawei Mate, ...